Amaqoqo ezinkanyezi esibhakabhakeni: funda ngawo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Izinkanyezi ezisesibhakabhakeni ebusuku zihlelwe ngendlela engahleliwe. Amanye abukeka emakhulu kanti amanye abukeka emancane ngezizathu ezahlukahlukene. Enye ubukhulu benkanyezi uqobo kanti enye ibanga eliphakathi kwaleyo nkanyezi neplanethi yethu. Okucatshangwayo ukuthi kunemigqa yokucabanga ejoyina izinkanyezi kanye nale esiyibiza izinkanyezi. Imilaza inencazelo futhi ibilusizo emlandweni. Lapha sizokutshela kabanzi ngemilaza bese usho eminye ebaluleke kakhulu.
Ngabe ufuna ukukhulisa ulwazi lwakho ngesayensi yezinkanyezi futhi wazi okuningi ngemilaza? Lapha siyakutshela.
1 Amaqoqo ezinkanyezi esibhakabhakeni ebusuku
3 Amaqoqo ezinkanyezi namuhla
4 Amanye amaqoqo ezinkanyezi abaluleke kakhulu
4.1 IBhele Elikhulu
4.2 IBhele elincane
Amaqoqo ezinkanyezi esibhakabhakeni ebusuku
Izinkanyezi azilutho nje njengeqembu lezinkanyezi, ifomu lokucabanga ngokuphelele, bathatha amafomu ezinyunyaneni zolayini Kunjengokungathi sihlanganisa amachashazi ukuwubumba. Amagama alezi zinkanyezi avela ezintweni zasenganekwaneni, ezilwaneni, kubantu abenze umsebenzi omkhulu wesintu noma izinto ezibalulekile.
Zibizwa ngamagama amagama afanele ngokwesiko avela esiLatini, esiGrekini nase-Arabhu. Leli gama livame ukuba nezinhlamvu ezincane zesiGreki eziqala ngo-alpha nakuzo zonke ezinye izinhlamvu ngokulandelana. Ngale ndlela, uyinikeza ukuhleleka kokutholwa ngokufunda igama. Ngemuva kohlamvu lwezinhlamvu zesiGreki, sithola isifinyezo segama lomlaza.
Uma siziqedela izinhlamvu zesiGreki ekusetshenzisweni kwezinkanyezi, sisebenzisa izinhlamvu zesiLatini. Lolu hlobo lwegama lesibizo yaziwa ngokuthi yiBayer. Izinkanyezi ezincane kakhulu zakhiwa igama elilandelwa isifinyezo esaziwa ngeFlamsteed. Njengoba kunamagama amaningi, inkanyezi ingaba namagama ahlukile emhlabeni jikelele.
Hhayi nje kuphela ukuthi singathola izinkanyezi ezifanayo ezinamagama ahlukene, kepha amaqembu ezinkanyezi akha izinkanyezi nawo abizwa ngokuhlukile.
Ezikhathini zasendulo, izinkanyezi kwakungu Umbuso omkhulu wokufunda ukuhamba ebusuku. Ngaphandle kokuzulazula kwe-GPS noma ama-radar kwanoma yiluphi uhlobo, ukuzulazula olwandle bekulawulwa ezinye izinhlobo "zobuchwepheshe." Kulokhu, izinkanyezi zisebenza njengereferensi ekhombisa ukuma lapho zazikhona.
Baphinde basebenza ukuthi bakwazi ukuphendula ngokudlula kweziteshi. Ngaphandle kwesimo sezulu, iziteshi azichazwa kahle. Ngalesi sizathu, ngokuhamba kwezinkanyezi bekungakwazi ukufaka isikhundla isikhundla uMhlaba ayenaso maqondana neLanga Uhlelo lomkhathi futhi wazi ukuthi babeyiphi inkathi yonyaka.
Njengamanje, ukusetshenziswa kuphela kwemilaza kungukuthi ukuze ngekhanda kalula isikhundla sezinkanyezi. Kumele sikhumbule ukuthi singabona izigidi zezinkanyezi esibhakabhakeni nokuthi, njengoba imizuzu namahora kuhamba, ziyahamba ngenxa yokuhamba kokujikeleza komhlaba.
Sekukonke sithola ukuqoqwa kwezinkanyezi okungama-88 emkhakheni wethu wasezulwini. Ngamunye wabo uthatha isibalo esehlukile esinegama, kungaba lenkolo noma inganekwane. Imidwebo emidala yamaqoqo ezinkanyezi kuthiwa yangaphambi kuka-4.000 BC. Ngaleso sikhathi, abaseSumeriya banikeza amagama izinkanyezi ezibalulekile njenge-Aquarius, behlonipha unkulunkulu wabo.
Amaqoqo ezinkanyezi namuhla
Amaqoqo ezinkanyezi "asetshenziswayo" namuhla enyakatho Nenkabazwe awahlukile kakhulu kunalawo ayebonwa ngabaseGibhithe lasendulo. Amanye amaqoqo ezinkanyezi abalulekile kwakunguHomer noHesiod. UPtolemy wayeyisazi sezibalo nesazi sezinkanyezi futhi wakwazi ukubona izinkanyezi ezingama-48 esinazo namuhla. Kulezo zinkanyezi ezingama-48 azithola, ezingama-47 zazo zisenegama elifanayo.
Phakathi kwezinto ezibaluleke kakhulu futhi ezaziwayo kukhona lezo ezisendizeni yomjikelezo woMhlaba. Ziyizinkanyezi zezinkanyezi. Zihlobene nezimpawu zezinkanyezi zomuntu ngamunye. Lokhu kuhlobene nenyanga yokuzalwa komunye nomunye unyaka wonke.
Kukhona nezinye ezaziwa kangcono njengeBig Dipper ezingabonakala kusuka enyakatho Nenkabazwe naseHydra. Lesi sakamuva singesinye sezinkanyezi ezinkulu kunazo zonke ezikhona egumbini lethu lasezulwini. Ukuqoqwa kwezinkanyezi ezingama-68 ezingabonakala ngeso lenyama. Okuphambene nalokho yiCroz del Sur, eyi-constellation enosayizi omncane kakhulu okhona.
Amanye amaqoqo ezinkanyezi abaluleke kakhulu
Izinkanyezi ziyahlukahluka ngokubaluleka kuye ngenkabazwe lapho sikhona. Isibonelo, eningizimu yezwe, iBig Dipper ingenye yezinkanyezi ezibaluleke kakhulu. Noma kunjalo, hhayi eningizimu yezwe. Lokhu kungenxa yokuthi ayibonakali lapho, ngakho-ke ayikwazi ukuhambisana. Masingakhohlwa ukuthi akuwona wonke amaqoqo ezinkanyezi angabonwa kusuka endaweni ethile eMhlabeni, kepha kuya kakhulu lapho sikhona. Kwenzeka okufanayo naku i-polar aurora.
Lapha sizokukhombisa ezinye zezinkanyezi ezidume kakhulu futhi ezibonakala kalula.
Ingenye yezinto ezibaluleke kakhulu futhi ezaziwayo. Ikhonza ukumaka inyakatho. Amatilosi asendulo ayisebenzisa ukumaka inkambo ebheke emazweni angaziwa.
Ngenye inkanyezi engabonwa kuphela enyakatho yezwe. Kodwa-ke, kwakubaluleke kakhulu ezikhathini zasendulo kumatilosi ngoba kwakwaziwa isikhathi sonyaka nesikhathi ngaphandle kokusebenzisa noma yiluphi uhlobo lwekhalenda.
Ingenye yezidume kakhulu futhi ethathwa njengesihle kunazo zonke ezulwini. Kuyaziwa nangegama lomzingeli. Imele amasiko athile futhi kungcwele ukuthi abaseGibhithe bahambe nabo ngesikhathi sokuhamba kobusuku-
Ngenye yezinto ezilula ukuzibona esibhakabhakeni ngesimo sayo se-M noma se-W. Isetshenziselwa ukukhomba ezinye izinkanyezi lapho kufundwa kulo mhlaba.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngezinkanyezi nokubaluleka kwazo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Amaqoqo ezinkanyezi esibhakabhakeni
Amaqoqo akho ezinkanyezi.
Ngiyabonga kakhulu ngokuphawula kwakho Jose!